१४ बर्षीय बालकको निधन भएपछि श्रदान्जली दिन जांदा दुई हजार भन्दा बढी स्पोर्टस कार र ७० मोटरसाइकल सामेल (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /International/१४ बर्षीय बालकको निधन भएपछि श्रदान्जली दिन जांदा दुई हजार भन्दा बढी स्पोर्टस कार र ७० मोटरसाइकल सामेल (भिडियो सहित)
एजेन्सी । सामान्यतया श वयात्रामा सयको संख्यामा मानिस सहभागी भएपनि धेरै मानिन्छ । समाजमा प्रतिष्ठित र मुलुकका लागि ठुलै योगदान गरेको ब्यक्तिहरुको श वयात्रामा हजारको संख्यामा मानिस सहभागी हुन्छन् । तर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ एउटा बालकको श वयात्रामा कति मानिस सहभागी होलान ? बालकका परिवार र आफन्त अनि छिमेकी । हामिले अनुमान लगाउने यहि हो । कुनै ब्यक्तिको निधन भएपछि शुभचिन्तक र आफन्त ति ब्यक्तिको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने गर्छन । त्यतिबेला श व अगाडि लगाएर अन्तिमसंस्कारका लागि लाने गर्दछन् । तर, अमेरिकामा एक १४ वर्षीय बालकको श वयात्रामा भएको सहभागीताले सबैलाई अचम्म पारेको छ । ति बालकको श व यात्रामा दुई हजार भन्दा बढी स्पोर्टस कार र ७० मोटरसाइकल सामेल भएका छन् ।
क्यान्सरबाट निधन भएका अमेरिकाको मिसौरी निवासी एलेक इनग्रामकी नाम गरेका यी बालककोे श वयात्रामा यति धेरै स्पोर्टस कार र मोटरसाइकल सामेल भएका हुन् । ति बालक कारका निकै शौखिन थिए । आफु अब जिवनको अन्तिम घडिमा आइपुगे भन्ने थाहा पाएका ति बालकले अन्तिम इच्छा अभिब्यक्त गर्दा आफ्नो श व यात्रामा स्पोर्टस कार सामेल भैदिए हुन्थ्यो भन्ने राखेका थिए । त्यो इच्छा उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिब्यक्त गरेका थिए । बारम्बार दोहोर्याएका उनको भनाई धेरै मानिसलहरुले सामाजिक सञ्जालमा देखेका थिए ।
उनको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न ‘सिडनिज सोल्जर्स अलवेज’ नामक एक संगठनले सहयोग गरेर त्यती धेरै स्पोर्टस कार र मोटरसाइकल सहभागी हुने वातावरण बनाइदिएको हो । सोही अनुसार उनको श वयात्रामा दुई हजार १०० भन्दा बढी स्पोर्टस् कार सामेल भएका थिए ।
त्यसैगरी ७० भन्दा बढी स्पोर्टस् बाइक पनि सामेल भएको बताइएको सो संगठनले जनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाका विभिन्न सहरबाट स्पोर्टस् कार मालिक आफ्नो कारसहित श व यात्रामा सहभागी हुन मिसौरी पुगेका थिए । श वयात्रामा सवारी साधनको लस्कर लामो भएपछि मिसौरी सहर दुई घण्टाभन्दा बढी समय बन्द गरिएको थियो ।
एलेकको अन्तिम इच्छा पुरा गर्नका लागि ‘सि;डनि;ज सो;ल्जर्स अल;वे;ज’ नामक संगठनका प्रमुख दाना क्रिश्चियन मेनलीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनको आफ्नै पीडा थियो । उनकी ८ वर्षीय छोरी सिडनीको पनि क्या’न्सरका कारण निधन भएको थियो । त्यसैले क्यान्सरकै कारण निधन भएका एलेकको अन्तिम इच्छा पूरा गर्नका लागि उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ ।
यी हुन् भाइरल ४ दिदीबहिनी, जो एकै दिन एउटै बिवाह मण्डवबाट बिवाह गर्दै !
अस्ट्रेलियामा पानीको हा’हाकार मच्चिएपछि १० हजार ऊँट गो’ली हानी मा’रिने !
अष्ट्रेलियामा आ’गलागीबाट घा’इते भएका जनावरको उ’द्धार शुरु !